के गर्मीमा काँचो लसुन खान मिल्छ ? के भन्छ आयुर्वेद ? | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख १४, २०७९ chat_bubble_outline0
लसुनन हाम्रो भान्साको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । खानालाई स्वादिलो बनाउन होस् वा स्वस्थवद्र्धक लसुनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । थुप्रै स्वास्थ्य विज्ञले पकाएको लसुनभन्दा काँचो लसुन थुप्रै गुणा बढी फाइदाजनक हुने बताउँछन् । यस्तै, हाम्रा घरका पाका सदस्यले पनि खाली पेटमा काँचो लसुन खान सल्लाह दिन्छन् । तर लसुन गर्मी पैदा गर्ने खाना हो, त्यसैले यो गर्मीमा खान सकिन्छ त भनेर प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यदि तपाईंको मनमा पनि यस्तै प्रश्न छन् भने यो लेखमार्फत् जवाफ दिइएको छ । यसबारे जानकारी लिन एक भारतीय सञ्चार माध्यमले आयुर्वेदिक डाक्टर श्रेय शर्मासँग कुराकानी गरेको छ ।
के गर्मी महिनामा काँचो लसुन खान मिल्छ ?
आयुर्वेदिक डाक्टरका अनुसार लसुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक छ । यसमा हल्का तिखो गन्ध हुन्छ जुन तपाईंका लागि निकै प्रभावकारी हुनसक्छ । लसुन गर्मी पैदा गर्ने खानेकुरा हो तर काँचो लसुनलाई गर्मी महिनामा खाँदा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन । विशेषगरी यदि तपाईं खाली पेटमा १–२ केस्रो काँचो लसुन खानुहुन्छ भने तपाईंलाई धेरै समस्याले छुन सक्दैन । तर यदि तपाईं तेल मसलासँग यो धेरै नै खानुहुन्छ भने गर्मीमा यो तपाईंका लागि हानिकारक हुनसक्छ । गर्मीमा बिहान खाली पेट लसुन खानुका फाइदा यसप्रकार छन् ।
गर्मीमा काँचो लसुन खानुका फाइदाः
​गर्मीमा कब्जियतसँग सम्बन्धित समस्या धेरै हुने गर्छृ । यस्तोमा काँचो लसुन तपाईंका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ । यदि तपाईं दैनिक बिहान नियमित रुपमा काँचो लसुन खानुहुन्छ भने यो कब्जियतबाट राहत दिलाउन प्रभावकारी हुनसक्छ ।
हाई ब्लड सुगर नियन्त्रणमाः
थुप्रै स्वास्थ्य विशेषज्ञ काँचो लसुन खान सल्लाह लिन्छन् । विशेषगरी मधुमेहका बिरामीका लागि यो निकै फाइदाजनक हुन्छ । मधुमेहमा काँचो लसुन खाँदा ब्लड सुगर नियन्त्रणमा हुन्छ । यसमा पाइने एन्टी–डायबिटिक गुण मधुमेह रोगीका लागि प्रभावकारी छ ।
भाइरल र ब्याक्टेरियल संक्रमणबाट जोगाउँछः
काँचो लसुन खाँदा भाइरल र ब्याक्टेरियल समस्या नियन्त्रणमा हुन्छ । वास्तमा एउटा एन्टिभाइरल, एन्टी–फंगल र एन्टी अक्सिडेन्ट गुण पाइन्छ जसले ब्याक्टेरियल र भाइरल संक्रमणबाट जोगाउन तपाईंलाई मद्दत गर्नसक्छ । विशेषगरी कोरोनाकालमा काँचो लसुनको सेवन तपाईंका लागि थप फाइदाजनक हुनसक्छ । यसले तपाईंको शरीरको प्रतिरोधी क्षमता पनि बलियो बनाउँछ ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्छः
गर्मीमा यदि तपाईं दैनिक १ देखि २ वटा काँचो लसुन खानुहुन्छ भने यो तपाईंको मुटुलाई स्वस्थ राख्न प्रभावकारी हुनसक्छ । वास्तवमा काँचो लसुनमा खराब कोलेस्ट्रोललाई कम गर्ने गुण हुन्छ । साथै यसले गुड कोलेस्ट्रोललाई बढाउने पनि गर्छ । शरीरमा गुड कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्दा तपाईंको मुटु स्वस्थ रहन्छ । यसका साथै यसले उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्छ ।